जुन 13, 2019 जुन 13, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, लामो आयु
लामो आयु बाँच्न के गर्नुपर्ला ? यो प्रश्न हरेकको दिमागमा आउन सक्छ । जीवनभर निरोगी रहेर बाँच्नु सवैभन्दा ठूलो उपहार हो तर यस्तो त्यति वेला साकार हुनेछ जुनवेला हामीले प्रकृतिको नियमलाई आत्मासाथ गर्नेछौं । प्रकृतिलाई नमानेर जब हामी अप्राकृतिक ढंगबाट बाच्न थाल्नेछौं त्यतिबेला हामी रोगको दल-दलमा प्रवेश गर्न थाल्नेछौं । हुन त जन्मपछि मृत्यु निश्चित छ । जन्मदै हामीले मृत्यु पनि लिएर आएका हुन्छौं । अतः कति अवधि बाँच्ने भन्ने कुरा पनि जन्मदै तय हुन्छ । तर, विभिन्न कारणले हामी पूर्ण आयु बाँच्न पाइरहेका छैनौं । जति अवधि बाँचेका छौं, त्यो पनि रोग र शोकमा बाँचिरहेका छौं ।
← हृदयघात (Heart Attack) को बारेमा जानकारी
फूड पोइजनका कारणहरु र उपचार →